Imaaraadka oo u yeeray madaxa Puntland Siciid Deni - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Imaaraadka oo u yeeray madaxa Puntland Siciid Deni
Imaaraadka ayaa u yeeray madaxa cusub ee Puntland Siciid Deni oo intii uu bedelay Cabdiwelli Gaas aan meelna u bixin. Siciid Deni ayaa la filayaa inuu hore ka soo qaato shaahiisa, asagoo laga rabo inuu fuliyo talaabooyin uu Imaaraadku ka rabo Somaliya guud ahaan.
Imaaraadka ayaa hore diyaarad ugu qaaday una soo celiyay madaxa Somaliland Muuse Biixi, ayadoo ujeedadu tahay inuu ku faano in dalka xilliguu doono iman karo xilliguu doobaba ka qaadan mar wuxuu rabo.
Shaki kuma jiro in Siciid Deni qaaday talaabo siyaasadeed oo aan laga fiirsan oo ay tahay isaga midka ka shalayn doona, waayo lacagi wax ma tarto aad ku iibsato sharaftaada ayuu yiri Shire Maxamuud oo Boosaaso jooga.
Imaaraadka ayaa Puntland ka fuliya mashaariic kala duwan oo ay ugu horeyso dekedda magaalada Boosaaso oo ay maamulaan, wuxuuna dareensan yahay Siciid Deni in Imaaraadku bixinin shaahiisa waana ujeedada safarkiisa ayuu yiri Shire Maxamuud.